China SBS farany godorao manify Manufacturers sy Suppliers | Hongyuan
manify tantera-drano godorao farany
SBS farany godorao manify dia atao amin'ny mamonto ny tena ratsy eo amin'ny godorao, na thermoplastic elastomer (toy ny styrene butadiene-SBS), nanamafy tamin'ny polyester na fiberglass, vita ny miakatra havany amin'ny tsara fasika, mineraly TAKELA-BATO (na ny voa), na polythene manify etc.
Tsara impermeability; Manana hery tensile tsara, elongation ny tahan'ny sy ny habe azo fahamarinan-toerana izay mifanaraka tsara ny substrate nanova sy mampitresaka; SBS farany godorao manify dia izy io no ampiasaina indrindra ao amin'ny faritra mangatsiaka amin'ny ambany mari-pana, raha APP farany godorao manify dia ampiharina ao amin'ny faritra mafana amin'ny hafanana avo; Tsara fampisehoana in manohitra ny puncture, anti-broker, manohitra ny fanoherana, manohitra ny fahasimban'ny, anti-maty fotsy, anti-weathering; Ny fanorenana no mety, ny fomba kivy dia afaka miasa ao amin'ny fizaran-taona efatra, tonon-taolana no azo itokisana
Py polyester G Glassfibre PYG Glassfibre hanatsarana polyester nahatsapa PE PE Film S Sand
Sehatra azo ampiharina:
Mety amin'ny fanorenana sivily tafo, ambanin'ny tany, tetezana, fijanonana, dobo, tonelina ao amin'ny tsipika ny tsy tantera-drano sy ny dampproof, indrindra ho an'ny trano ambony eo ambany hafanana. Araka ny tafo injeniera stipulation, APP farany godorao manify azo ampiasaina ao amin'ny Grade Ⅰ trano sivily sy ny trano orinasa izay manana fitakiana manokana tsy tantera-drano.
Fitehirizana sy ny fitaterana toromarika
Rehefa fitehirizana sy ny fitaterana, isan-karazany sy ny habeny ny vokatra dia ho stacking manokana, tsy tokony afangaro. Fitehirizana mari-pana dia tsy tokony ho mihoatra noho ny 50 ℃, ny haavony dia tsy mihoatra ny roa sosona, ao amin'ny Mazava ho azy fa ny fitaterana, manify dia tsy maintsy mijoro.
Ny haavon'ny stacking dia tsy mihoatra ny roa sosona. Mba hisorohana ny Jery mitongilana na ny fanerena, rehefa ilaina izany fonony ny tsapan'ny lamba.
Amin'ny toe-javatra ara-dalàna ny fitehirizana sy ny fitaterana, fitahirizana isan-taona no fe-potoana hatramin'ny daty ny famokarana
SBS [nampahery ny GB 18242-2008]
Mety levona News / (g / M ²) ≥
tsy misy lelafo
No mikoriana, tsy misy Mandrotsaha fahamarinana
Impermeability 30 minitra
No crack, tsy misy afa-
Manaraka: APP farany godorao manify
App novaina godorao manify Price
App Modified hoditra manify tantera-drano ny godorao
Novaina Polyurethane tsy tantera-drano
Polyurethane Coating For Concrete , Single-Ply Roofing Membrane , Acrylic tantera-drano Coating, malefaka Polymer-simenitra Coating tantera-drano , Water Base Polyurethane Waterproof Coating , Tpo manify tantera-drano,
malefaka Polymer-simenitra Coating tantera-drano , Acrylic tantera-drano Coating, Water Base Polyurethane Waterproof Coating , Single-Ply Roofing Membrane , Polyurethane Coating For Concrete , Tpo manify tantera-drano,